Apple "mpako" nke Apple egbochi gị inwe nke gị Netflix | Esi m mac
Apple "mpako" Apple na-egbochi ya inwe Netflix ya
Na Apple ka "ahapụla" abụghị ihe na n'oge a ga-eju onye ọ bụla anya, agbanyeghị, omume ahụ yiri ka a ga-ekwusi ike n'oge ndị a n'ụzọ dị ụlọ ọrụ ahụ gara biri na "ọdịbendị nke mpako", ọnọdụ ga - egbochi ya na igbochi nnweta isis nke ga - eme ka atụmatụ nkwanye vidio nke ụlọ ọrụ ahụ ka mma.
Otu akụkọ bipụtara site na Bloomberg na-abanye n'ime omume M&A nke Apple na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na-egosipụta "mpako" nke Apple gosipụtara na mkparịta ụka dị otú ahụ.
1 Apple prefers ime ịzụta
2 Apple ga - achọ ahịa buru ibu karịa ihe Beats zụrụ na 2014
3 Atụmatụ Apple anaghị adị irè mgbe niile
Apple prefers ime ịzụta
Dika uzo di iche iche nyochaworo site na Bloomberg ndị soro Apple rụọ ọrụ n'ọhịa ahịa na mgbasa ozi, ụlọ ọrụ na-agba mbọ ugboro ugboro iji nweta nnukwu azụmahịa na ala, n'agbanyeghị a "usoro nke quirks", gụnyere ịjụ ịrụ ọrụ na ndị na-echekwa ego, enweghị ahụmịhe ya na nnweta buru ibu, yana "ịchụpụ ihe egwu" pụtara ìhè. »
Apple bụ nwekwuo mmasị, ma nwee ike, n'ịmepụta ọrụ nke ha karịa ịzụta ha site n'aka onye na-asọmpi, na-ewepu oge ụfọdụ dị ka nnweta 2014 nke Beats na mbido Apple Music.
"Nzọụkwụ mbụ na M & A bụ inwe nkwenye siri ike banyere ihe ịchọrọ ịme," ka Eric Risley, onye na-elekọta njikwa na Architect Partners LLC nke kwurịtara ahịa na Apple. "Apple, ikekwe karịa ọtụtụ, na-eche na ọ nwere ike ịwu ihe" karịa ịzụta ha, ka ọ gbakwụnyere. Otu ọnụ na-ekwuru Apple jụrụ ikwu okwu.
Dabere na ọtụtụ ndị nyocha na ndị na-etinye ego na-enyocha, Ihe ọzọ Apple ga - eme ga - abụ inweta ọrụ vidiyo gụgharia. Companylọ ọrụ ahụ amalitela inwe ọganihu iji wusie nkewa nke ọdịyo ọdịyo mbụ na Apple Music, yana Carpool Karaoke: Usoro ahụ y Mpaghara nke ngwa nke ahụ ga-abata n'oge opupu ihe ubi a, mana ndị nyocha na-ekwu na ịchọrọ ihe "yiri Netflix ma ọ bụ Amazon Prime Video."
Apple ga - achọ ahịa buru ibu karịa ihe Beats zụrụ na 2014
Erick Maronak, onye isi njikwa ego na Victory Capital Management, kwuru na Apple "ga-achọ ihe buru ibu karịa nnweta yiri Beats" iji ruo ebumnuche nke $ 50.000 ijeri na ntinye ego ọrụ. Nke a nwere ike ịgụnye ndị ọzọ enwere ike inweta mgbasa ozi dịka Walt Disney ma ọ bụ Tesla, dị ka onye nyocha Baird William Power na-ekwu.
Ebumnuche ọzọ ezi uche dị na ya, na nke ruteworo n'oge dị iche iche, bụ Netflix, mgbe ọ bụla ihe dị ka ụlọ ọrụ "chọrọ ọ dịkarịa ala otu nnweta vidiyo vidiyo dị ukwuu".
Mana ọbụlagodi ebe a, ụfọdụ ndị nyocha na ndị na-etinye ego na-akwado nnukwu nnweta, ọkachasị na ntaneti vidiyo vidio. Apple amalitela ikesa vidiyo site na ọrụ egwu, yana ịkekọrịta ndị na-eweta vidiyo ndị ọzọ na ngwa TV ya, ma ọ nweghị ọrụ yiri Netflix ma ọ bụ Prime Video si Amazon.com Inc.
Na Fraịdee, onye nyocha Sanford C. Bernstein Toni Sacconaghi kwuru na Apple chọrọ ọ dịkarịa ala otu nnweta nnweta na vidiyo vidiyo. Iji ruo ihe mgbaru ọsọ ya nke $ 50.000 ijeri, ụlọ ọrụ ahụ ga-achọta ihe ọzọ $ 13.000 ijeri na-enweta ego ọrụ n'ime afọ anọ na-esote, karịa ihe ọ nwere ike ịmepụta. Netflix Inc kwụsịrị 2016 na ahịa nke ihe na-erughị ijeri $ 9, n'ihi ya, ọbụna ịzụta azụmahịa ahụ nwere ike ọ gaghị ezu, onye nyocha ahụ kwuru.
Atụmatụ Apple anaghị adị irè mgbe niile
Ndị otu azụmaahịa Apple nwere mmadụ iri na abụọ ndị Adrian Perica duziri. Imirikiti onyinye ahụ "a na-eme iwu ndị injinia ụlọ ọrụ", Ya mere, otu a na-ezukọ na ndị injinia Apple nke na-adụ ha ọdụ maka ihe mgbaru ọsọ nnweta dị mma.
Usoro ya na-arụ ọrụ nke ọma maka obere azụmaahịa, mana ọ bụghị nke ukwuu maka nnukwu azụmahịa:
Apple jụrụ iso ndị ọrụ akụ na-etinye ego na-arụ ọrụ iji gbalịa isoro ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arụ ọrụ. Nke a na - ebute ikuku mpako, dị ka Eric Risley si kwuo, onye ya na ndị Apple kparịtara ụka, na-ekwukwa na "a na - eji ha enwe ike ịbanye ma nweta akụnụba mara mma."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Apple "mpako" Apple na-egbochi ya inwe Netflix ya
Nsogbu maka Apple na Spain: a na-ekwu ụtụ isi ndị akwụghị ụgwọ kemgbe 2003